Fitsidihana nitera-doza :: Mpizaha tany Espaniola maty nianjera avy eny ambony vato • AoRaha
Fitsidihana nitera-doza Mpizaha tany Espaniola maty nianjera avy eny ambony vato
Namoy ny ainy nianjera avy eny ambony harambato ny lehilahy iray, fitopolo taona, teratany espaniola, izay nitsidika ny valan-javaboahary Anjà any amin’ny distrikan’ Ambalavao Tsienimparihy, tamin’ny herinandro lasa teo. Nieren-doza ny vadiny sy ireo mpitari-dalana niaraka taminy.
Fantatra, araka ny fampitam-baovao avy amin’ ny mpitandro filaminana any an-toerana, fa ny lohan’ilay lehilahy teratany vahiny no voa sy naratra mafy, tamin’ io fianjerany io. Izany no heverina ho nitarika ny fahafatesany teo no ho eo.
Niaraka tamina mpitari-dalana roa ireto mpivady samy efa zokiolona teratany espaniola no tonga tao amin’ny valanjavaboahary Anjà. Mpitari-dalana roa tompon-toerana no nandray sy nitondra an’ireto mpizaha tany nitsidika ny valan-javaboahary.
Manamorona ny lalam-pirenena fahafito ny valan-javaboaharin’Anjà. Ankoatra ny karazam-biby sy zava-maniry dia rakotra haram-bato ny toerana. Taorian’ny angom-baovao sy fanadihadiana nataon’ny pôlisy teny an-toerana sy tamin’ ireo tompon’andraikitra no nahenoana ny zava-niseho rehetra. Teo am-pitsidihana ny faritra indrindra ireo mpizaha tany no niseho ny loza tampoka.
«Niteny tamin’ireo mpizaha tany ny mpitari-dalana eo an-toerana fa tokony hotantanana izy mivady rehefa hihanika ny haram-bato iray. Nandà ilay lehilahy lehibe ka ny vadiny irery no navelany hatao izany. Niakatra voalohany ny mpitari-dalana roa. Nanaraka azy ireo ilay vehivavy teratany vahiny notantanana sy ny mpitari-dalana roa ambiny. Ilay lehilahy lehibe kosa no tany amin’ ny farany », hoy ny pôlisy any Ambalavao.
Voalaza fa nibolisatra teny ambony vato ilay Espaniola. Ny lohany no nandeha mialoha ary nitontona tamin’ny tany, araka ny fanazavana voaray hatrany. Noentina nokarakaraina tany amin’ ny tranom-patin’ny hôpitaliben’Ambalavao ny razana. «Tsy tafaresaka sy nihaona tamin’ny vadin’ity namoy ny ainy akory izahay. Ny fanadihadiana teny an-toerana no nataonay», hoy ihany ny pôlisy.
Fanolanana sy fifamotorana Lehilahy voatondro ho nahabevoka ny zanany vavy, 15 taona
Fitsoahana loza Nandositra ny môtô nandratra olona teny Ilafy
Fahafatesana niniana natao :: Notsenain’ny fahafatesana ilay lehilahy nikasa hijery ny zafikeliny